Shina Mavesatra Adidy Poly Tarp orinasa sy mpanamboatra | ShiningPlast
PE Taratra Polisy PE Heavy dia vita amin'ny lamba vita amin'ny HDPE, natsofina teo amin'ny andaniny roa niaraka tamin'ny fitaovana LDPE, hafanana efatra nanisy tombo-kase nasiana tady PP tany hem. Grommets aluminium amin'ny elanelam-baravarana manodidina amin'ny zorony efatra Manamafy ny bara plastika.
Ny lamba vita amin'ny hoditra dia vita matevina ary ny kofehy vita amin'ny mahazakan-tsolika matevina dia miantoka ny vokatra vita amin'ny fananganana. Ny fitsaboana UV sy ny sisiny dia azo alaina ihany koa mba hahatonga ny goavambe ho mateza sy hatanjaka.
Weight 200-400 gsm
harato 14x14 ~ 16x16
fanenomana Rano ny rano ary ny boribory mihetsika
Color Araka ny fangatahan'ny mpanjifa
Size 6 '* 8' / 8 '* 8' / 8 '* 10' Max ho 100 '* 100'
pirinty natao tamin'ny Hatramin'ny 4 loko
1. Ny singa tsirairay nofonosina ao anaty kitapo pol an'ny PE misy marika nasiana marika.
2. Vokatra vitsivitsy miangona ao anaty baoritra iray na fonosana anaty baoty.
3. Palletization manokana (US na EN Standard Pallets) raha ilaina.
· Matanjaka sy maharitra: Matanjaka ary maharitra ny PE voany.
· Titafandoha: mateza mahery vaika matevina dia manamaivana ny fahatapahana mandritra ny fitaterana sy ny fitahirizana.
· Tazovina: manakana ny poizina na fahasimban'ny orana na ny hamandoana.
· UV-Resistant: Nampiasa ny fitsaboana sy fanamainana UV tsara indrindra izahay mba hiantohana ny fametrahana mandritra ny fiparitahan'ny UV maharitra.
Previous: Mavesatra adidy Poly Tarp
Manaraka: Tarpaulin Rolls